Eritrea maka jawaabi doonta Duqeyntii TPLF uga timi Xalay, & War cusub oo la shaaciyey.
ASMARA(P-TIMES) – Golaha Amniga Qaranka ee dalka Eritrea oo ka kooban 6 xubnood ayay wararku sheegayaan in ay leeyihiin kulamo gaar ah oo ay uga hadlayaan arrimaha ku wajahan jawaabta laga bixinayo weeraradii xalay ka yimi Makele ee ay TPLF ku garaacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Casmara, taas oo ay sheegatay masuuliyadeeda TPLF.
Hoggaamiyaha Xasaanada laga qaaday ee TPLF ayaa sheegay in ay ayagu ka dambeeyeen weerar lagu qaaday goobo muhiim ah oo kuyaalay gudaha Eritrea, wuxuuna sheegay in ay sidaas u sameeyeen maadaama gudaha Asmara ay ahayd halka laga soo duuliyey duulimaadyo diyaaradeed oo duqeymo geystay.
Warbaahinta taageerta dawladda Eritrea waxay qortay in golaha Amniga guud ay suuragal tahay in ay jawaab-cad ka bixiyaan weeraradii xalay lagu qaaday caasumada dalkooda, ayna sugayaan dhambaal uga imaanaya xaga Addis Ababa oo ay leeyihiin xariir wanaagsan.
Macluumaad la helay ayaa cadeynaya in Abiy Axmed-ka xukuma Itoobiya uu kucadaadinayo Madaxweynaha Eritrea in aan waxba talaabo ah la qaadin, isagana loo daayo howlaha ka socda gobalka Tigree-ga, maadaama dagaalka cusub ee ay ku qaadeen Casmara uu yahay mid ay u doonayaan in dagaaalka la balaaariyo.
Addis Ababa waxay fursad weyn u aragtaa talaabooyinka Tigree-ga ay qaadayaan, gaar ahaana in ay doonayaan in madaafiicda ay haystaan ay u adeegsanayaan in ay ku waxyeeleyaan amniga guud ee gudaha Itoobiya iyo kan gobalkaba, ayna tahay talaabo kale oo ay darsanayaan waqtigan.
Warbaahinta Casmara waxay tabisay in gantaalkan laga soo riday deegaanka lagu magacaabo Yeha oo ah magaalo yar oo ku dhaw magaalada weyn ee Adwa oo ay dhawaan galeen Milateriga Itoobiya, kana qabsadeen TPLF.
Magaaladani, sida muuqata waxay u jirtaa caasumada Eritrea wax ka yar 191KM, taas oo ka dhigan in ay madaafiic badan gaari karto gudaha Casmara, ayna tahay goobo ay calaamadsadeen kooxaha TPLF oo horey u hayey macluumaad guud ee xarumaha muhiimka ah ee Eritrea, maadaama ay dagaalo ka dhaxeeyeen.
Indhaha ayaa lagu hayaa jawaabta ka imaan doonta Asmara, xili la xaqiijinayo in Kumanaan katirsan Milateriga dalkeeda ay hadda kusugan yihiin deegaan aad ugu dhaw magaalada Shire ee Ismaamulka Tigree-ga oo ay doonayaan in ay xaduudaha amnigooda sugaan.